RASMI: Garsooraha Kulanka El Clasico Ee Real Madrid Iyo Barcelona Oo La Magacaabay - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaRASMI: Garsooraha Kulanka El Clasico Ee Real Madrid Iyo Barcelona Oo La Magacaabay
RASMI: Garsooraha Kulanka El Clasico Ee Real Madrid Iyo Barcelona Oo La Magacaabay
April 7, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka La Liga 1
Garsooraha dhexdhexaadinaya kulanka adag ee El Clasico ee Sabtida ay foodda isku darayaan Real Madrid iyo Barcelona ayaa la shaaciyey, waana xaakim aan kugu cusbayn oo hore usoo qabtay kulamo waaweyn.
Maamulka LaLiga ayaa kulankan u magacaabay in uu qabto garsoore uu kaadhku kasoo horreeyo oo aan ciyaartoyda u aabbo yeelin, horena ciyaartooyo waaweyn garoomada uga saaray.
Ciyaarta El Clasico ee Sabtida oo lagu tilmaamay middii kala saari lahayd kooxaha ku loollamaya horyaalka, ayaa waxay kusoo beeganay xilli ay Barcelona laba dhibcood ka horreyso Real Madrid oo ay kaalinta labaadna fadhido, isla markaana hal dhibic kaliya ka dambayso Atletico Madrid oo hoggaanka haysa.
Barcelona oo wareeggii 16ka kaga hadhay Champions League ayaa dedaalkeeda oo dhan iskugu geynaysa horyaalka LaLiga oo ay hadda tahay kooxda loo saadaalinayo, laakiin Real Madrid ayaa iyaduna laba dhibcood oo kaliya ka dambaysa, isla markaana qaab ciyaareed fiican kusoo jirtay kulamadii ugu dambeeyey.
Zinedine Zidane oo ay si la mid ah Barcelona dhibaatootay bilowgii xilli ciyaareedka ayaa xalay guul weyn ka gaadhay Liverpool oo ay lugta hore ee wareegga siddeedda kaga badisay 3-1, taas oo siinaysa niyad dhis ka hor kulanka Barcelona.
Guddida Farsamada iyo garsooreyaasha ayaa ciyaartan u magacaabay in uu dhexdhexaadiyo garsooraha caanka ah ee Mateu Lahoz oo lagu yaqaano in kaadhka aanu kala gabbanin ciyaartoyda, wax saayiraad ahna aanu samaynin.
Lahoz ayaa noqon doona garsooraha dhexe ee ciyaarta, waxaase uu caawin ka heli doonaa Soto Grado oo loo doortay in uu noqdo garsooraha VAR.
Ka hor kulanka El Clasico, Lahoz ayaa indhaha taageereyaashu qaban doonaan, laguna qiimaynayaa ciyaarta Bayern Munich iyo PSG ee caawa oo isaga loo doortay in uu dhexdhexaadiyo.
Si kastaba, ciyaartii horraantii xilli ciyaareedkan ee Barcelona iyo Real Madrid ee ka dhacday garoonka Camp Nou, waxa 3-1 kusoo badisay Real Madrid.
Beenale kaadiba ayaatay goormay baraajeeyen Barcelona iyo Real Madrid 3:1Real